Odayaasha Garissa oo ugu baaqay dowlada Kenya in talaabo ay u ... | Universal Somali TV
Odayaasha Garissa oo ugu baaqay dowlada Kenya in talaabo ay u qaado isku dhaca dhanka dhulka ee ka taagan Waqooyi Bari
Muranada ku saleysan dhanka dhulka ayaa waxay ku sii xoogeysanayaan qeybo ka mid ah afarta waax oo ay ka kooban tahay magaalada Garissa iyadoo arintaan walaac xoogan ay ka muujiyeen waxgaradka iyo culimada Garissa.
Kadib wadaxaajood la xiriira arintaan oo ay yeesheen odayaasha magaalada ayaa waxaa arintaan baaq ka soo saaray Dubat Cali Camey oo ku hadlay afka odayaasha waxaana uu sheegay in aysan u dulqaadan doonin dhibaatada Jirta.
Mr Dubat ayaa ugu baaqay dhalinyarada in aysan isku leynin dhulka iyadoo loo adeegsanayo hab qabyaalad ay ku dheehan tahay ayna ogaadaan in yihiin ubaxa iyo aayaha Kenya ee mustaqbalka Danbe.
Oday dhaqameedkaan ayaa dhanka kale ugu baaqay gudiga amniga Garissa in talaabo ay u qaadan wax ka qabashada arintaan, ayna ku amraan gudoomiye yaasha arimaha amniga iyo bulshada u xilsaaraan waaxyaha ee loo yaqaan Cheifafka in ay soo sheegaan shaqsiyaadka Hurinaya dhibaatada ka taagan Iftin iyo Waberi.
Dubat cali Camey ayaa ugu danbeyn sheegay in ismaamulada kale ee Kenya lagu qabto mas,uuliyiinta sameynaya kicinta dadweynaha waxaana uu isweydiiyay in Garissa ay ka mid tahay Kenya iyo Inkale.
Kan-xigaMuwadiiniinta Nigeria ee ku sugan koo...
Kan-horeWHO oo sheegtay in ay korortay dadka ...
50,414,298 unique visits